मेरो बुबा बुहारीलाइ जेल हाले दाइलाइ छुरी हाने ! हेम थापाले खोले यस्तो रहस्स्य (भिडियो सहित) – PanchKhal Online
Home/भिडियो/मेरो बुबा बुहारीलाइ जेल हाले दाइलाइ छुरी हाने ! हेम थापाले खोले यस्तो रहस्स्य (भिडियो सहित)
मेरो बुबा बुहारीलाइ जेल हाले दाइलाइ छुरी हाने ! हेम थापाले खोले यस्तो रहस्स्य (भिडियो सहित)
हाल अमेरिका निवासी रहेका समाजसेवी हेम थापाको स्थाई घर तेह्रथुम जिल्ला मोराहाङ गाबिस ९ सिकिदेम हो । आजको दिन सम्म २ करोड भन्दा बढी रकम थापाले दुखी: गरीब पिडित हरुलाइ सहयोग गर्दै आएको जानकारी स्कटनेपाल लाइ गराउनु भयो । आजसम्म जति पनि सहयोग गरे आफ्नै पसिनाको कमाईको पैसा खर्च गरिरहेको थापा बताउँछन ।
पछिल्लो समयमा निकैनै सामाजिक संजालमा चर्चामा देखा परेका हेम थापालाइ कुनै परिचय को आबस्यकता नपर्ला। अमेरिकामा रहेर पनि आफ्नो देश र मातृभूमिका लागि लामो समय देखि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। जिबनमा आफुले सकेको अरुलाई सहयोग गर्नु पर्छ भन्ने बिचार बोक्दै अघि बढ्दै आउनु भएका हेमले करोडौ बराबरको सहयोग गरि सक्नु भएको छ। बर्षौ देखि बिदेशमा रहेर पनि सहयोगको खाचो रहेका हरुलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ।
यसरि समाज सेवी हेम थापाले अरु बाट संकलन गरेर हैन आफ्नै कमाइको रकम बाट सहयोग गर्दै आउनु भएको छ जानकारी गराउनु भयो। धेरैलाई दुख र पिडा मा साथ् दिदै मल्हम लगाउदै अघि बढ्नु भएका समाजसेवी हेम थापा लाइ यसरि नै अघि बढीरहन स्कटनेपाल परिवारको सुभकामना।
हेरौ हेम थापा समाजसेवीको वाटोमा हिड्दा हिड्दै आफ्नो संघर्ष दर्दनाक पीडादायक जीवन कहानी भिडियोमा :
डाक्टरले मर्ने मिती तोकेपछी घर फर्किएकी क्यान्सर पिडीत सरिता लामा कसरी बाँचिन.. हेर्नुहोस (भिडियो सहित कुराकानी)